“Ictiraafka Inay Raadiyaan Waxay Shaqadooda Tahay Oo Kaalintoodiina Ka Gaabiyey Baarlamaanka” Safiirka Somaliland Ee Faransiiska – Wargeyska Saxafi
“Ictiraafka Inay Raadiyaan Waxay Shaqadooda Tahay Oo Kaalintoodiina Ka Gaabiyey Baarlamaanka” Safiirka Somaliland Ee Faransiiska
Paris, France, November 28, 2016 (Saxafi) – Mr. Cali Ismaaciil Xasan, Safiirka xukuumada Somaliland u fadhiya dalka Faransiiska ayaa ku dhaliilay golaha Wakiillada inay ka gaabiyeen wax uu ugu yeedhay kaalintii ay ka qaadan lahaayeen dardargelinta qadiyadda madaxbanaanida Somaliland.
Mr. Cali Ismaaciil oo wareysi dhinacyo badan leh mareegta Somalilandspan kula yeelatay khadka Telefoonka, isagoo ku sugan caasimada Paris, ee France ayaa sheegay in shirkado caalami ah xiisaynayaan maalgashiga kheyraadka baddaha Somaliland.
Su’aalo kala duwan oo wareysiga lagula yeeshay iyo jawaabahii uu ka bixiyey waxaa ka mid ahaa mar uu sharaxayay Xafiiska oo uu yidhi “Xafiiska Somaliland ee Faransiisku, waxaana la furay sannadkii 2007-kii, xilligaa ilaa maantana hawlaha uu qabanayey xafiisku way badnaayeen, wakhtiyaa na soo maray aanu ictiraafka Somaliland helitaankiisa meel ku koobsanay, haddana, siyaasadu wax meel taagan maahee, isbedelaa dhaca labada dhinacba. Ma yara waxqabadka xafiisku, waxaanu soo qabanqaabinay imaatinka afar booqasho oo madaxweynayaal Somaliland ahi ku yimaadeen Faransiiska, AHN marxuum Maxamed X Ibraahim Cigaal, Madaxweynahii hore Md. Daahir Rayaale Kaahin, iyo Madaxweynaha xilligan Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waad ka dareemi kartaa dal booqashooyin heer madaxweyne intaas oo jeer tageen soo dhoweynta iyo kalgacalka uu inoo hayo. Xidhiidhka xafiiska safaarada iyo xukuumadda Faransiisku aad ayuu u wanaagsan yahay, in kastoo aynaan ka haleelin hawlahii qadiyadda Ictiraafka Somaliland” ayuu ku jawaabay mar uu warbixin kooban ka bixinayey hawlaha xafiiska faransiisku qabto.
Mar la weydiiyey xidhiidhka u dhexeeya xukuumada faransiiska iyo xafiiska Somaliland iyo sidday u arkaan qadiyadda madaxbanaanida waxuu yidhi, “Arrinkaa waxay la wadaagaan mowqifka wadamadda kale, oo shardi inooga dhigay in wadamada Afrika ku horeeyaan. Annigu waan aaminsanahay sida Faransiiska in aqoonsigeena ka raadino wadamada Afrika, isla markaana Faransiisku waa dal inoo fududeyn kara galangal aynu qadiyadeena uga helo wadamada Afrika, maadama uu saaxiib la yahay wadammo badan oo Afrika ah. Sidoo kale caalamka waxa ugu horeeya ee qadiyadeena iibgeyn kara annigu waxaan u arkaa inay tahay shirkadaha aduunka xidhiidh inoo samayn karta oo soo saarista manaafacaadka kheyraadkeena kula heshiino.
Shirkadaha aad soo qaaday, hore waxa jirtay shirkada Bollore oo Faransiis ah, muddo badana xiisaynaysay maalgelin ay ku samayso dekeda Berbera, balse nasiib aan u yeelan, ma jiraan culaysyo arrinkaasi kaga keenay dannahii Somaliland kaga xidhnaa Faransiiska, oo la weydiiyey ayuu yidhi, “Walaahi way ku soo kordhin kartaa, kolay caqabado dib u yara rakaadinayey horusocodkii xafiiska way keentay, saamayn way ku leedahay, laakiin, xilligan waxaan ku jiraa wakhtigii la yidhi ‘Duufaan xagaa waa laga foorarsadaa’, inkastoo dedaalkii xafiiska iyo shaqooyinkiisi aanu isbedelin, haddana waxyaalo badan ayaan dareemayaa, oo wasaaradii aan la shaqeynayey waa Arrimaha Dibedda, wax iska bedelay ma jiraan, laakiin dad badan oon ku xidhna markaan indha-indheeyo waan ka dareemaa.
Wadan walba iyo siyaasad walba hab loo raaco ayey leedahay” ayuu yidhi Mr. Cali Ismaaciil, safiirka Somaliland u fadhiya dalka Faransiiska, mar la weydiiyey dedaalo loogu jiray dardargelinta qadiyadda madaxbanaanida Somaliland, waxa dhinacooda ka qabsoomay. Isagoo raaciyey, “London iyo Paris isku mid ah, London dadkeenu qarniyo badan ayey soo degenaayeen, kuna soo dhaqmayeen, halka Paris aanay sidaa ahayn, markaa bulsho laga raadiyo qadiyadda ictiraafka Somaliland ma joogto Paris, inkastoo haddana in dedaalo In la geliyo ay u baahan tahay kuna jirno. Ictiraafka Somaliland dariiqyo badan ayaa loo mari karaa, sida Guddiga heer Qaran ee la sameeyey iyo madaxda Wasaarada Arrimaha Dibedda, haddana, annigu meesha aan dhaliisha saarayo, ee kaalintii ay ka qaadan lahayd ka gaabisay waa golaha wakiillada, xukuumadu kaalinteedii way wadaa. Ictifaarka inay raadiyaan waxay shaqadooda tahay, kaalintoodiina ka gaabiyey, kuna dhaliilayo waa goleyaasha Baarlamaanka. Baarlamaanku iyagaa raadsan kara baarlamaanada dhigooda ah, kuwa Afrika, Carabta, Yurub ama kuwa wadamada, maaha inay shaqoodu ku ekaato dawladii sidan ayey tidhi, iyo sidaa.
Sannadkii 2009, waxaan dalka keenay guddiga isku-dhafan ee Baarlamaanka Faransiiska, ee saaxiibada Afrika, gudoomiyahoodii ayaan keenay, hadday ku xidhmaan oo isfaham dhexmaro guddiyada baarlamaanada caalamka, iyagaa cid walba kaga haboon ka midho-dhalinta qadiyadda ictiraafka Somaliland. annigu dhaliisha halkaa ayaan saarayaa. Waxa xidhiidh dambe oo shirgudoonka wakiiladu la yeesheen ma jirto wefdigii Baarlamaanka Faransiiska oo heshiis isfaham dhexmaray, xilligan weli fursadaa way u furan tahay golaha baarlamaanka, hadday gudanayaan waajibaadka ka saaran.
Mar la weydiiyey faa’iidooyinka uga soo baxay Somaliland, shir caalami ah oo lagaga hadlayey kheyraadka badda oo safiir Cali sannadkii 12aad ee xidhiidh ah kaga qeybgalay dalka Faransiiska ayuu yidhi, “Faa’iidada bani’aadamku badda ayey ku dhan tahay, hadaan tusaale ku siiyo 300 mitir biyaha badda marka hoos loo gaadho, waa biyaha caafimaad ahaan loo siin karo ilmaha dhashay, sannadkan waxa shirka furay madaxweynaha Faransiiska, taasoo nasiib wanaag ii noqotay anigoo Somaliland metelaya ayaan ka qeybgalay shirka kheyraadka baddaha, iskuna gacanqaaday Madaxweynahii Faransiiska.
Waxaan ka jeediyey muhiimada badda Somaliland oo dhererkeedu yahay sideed boqol iyo konton kilo mitir oo ka caagan mushkiladaha budhcadbadeedka, taasoo dad badan iyo shirkado si wey u xiiseeyeen maalgashi ay ku samaystaan, waxaanay shirado badan ii balanqaadeen markaan sharaxaada ka jeediyey shirka, hadii nidaam ganacsi oo furfuran ay leedahay Somaliland, inay xafiisyo ka furan doonaan Somaliland. sannadkan dambena waxay igu martiqaadeen inaan ka soo qeybgeliyo shirka madaxda Somaliland gaar ahaan wasaarada kaluumaysiga iyo gaar ahaan shirkadaha kaluumaysiga Somaliland.
November 28, 2016 November 29, 2016 Wargeyska SaxafiAqoonsiga Somaliland, Baarlamaan, Cali Ismaaciil Xasan, France, Golaha Wakiiladda Somaliland, Madaxbanaanida Somaliland, Safiirka Somaliland ee Faransiiska
Previous Previous post: Xisbiga KULMIYE Oo Meesha Ka Saaray Inuu Burburay Wadahadalkii U Socday Garabka Jamaal Cali Xuseen
Next Next post: Gaashaan-Buurta Axmed Faarax Oo Kulan Ay Madaxweynaha Kula Qaateen Burco Ku Balanqaaday inay Taageerayaan KULMIYE Iyo Musharaxiisa